Fanambarana Ny Fahafahan’ny Aterineto · Global Voices teny Malagasy
Fanambarana Ny Fahafahan'ny Aterineto	Voadika ny 22 Jolay 2012 0:51 GMT
Zarao: Araka ny fandinihan'ny maro, tonga aminà fotoana goavana indrindra izao tontolo izao raha ny momba ny fahalalahan'ny aterineto. Any amin'ireo firenena maro eran'izao tontolo izao, miforona ireo lalàna vaovao hanivanana ny Aterineto, raha mitombo ny loza mitatao atrehan'ireo mpitoraka bilaogy noho ny fitenenan'izy ireo.
Tamin'ny taona lasa, niombon-kery tsy nisy ohatra izany ireo fikambanana eran-tany hiadiana ho amin'ny fahalalahan'ny Aterineto. Hatrany amin'ny ady nanoherana ny SOPA sy ny PIPA tany Etazonia ka hatramin'ireo ezaka eran-tany izay namono ilay Anti-Counterfeiting Trade Agreement (ACTA), nahatratra ny “zeitgeist”-n'ny fahalalahan'ny Aterineto sy ny fivelarana isika. (Fanamarihana :”zeitgeist” dia entina manondro ny hoe fanahin'ny vanim-potoana iray)
Miaraka amin'izany voarakitra ao an-tsaina, amin'izao fotoana izao dia niombona ireo vondrona maro hamorona ny Fanambarana ny Fahalalahan'ny Aterineto, izay iray amin'ireo mpanao sonia voalohany indrindra ny Global Voices Advocacy. Hatreto, nosoniavinà fikambanana sy orinasa mihoatra ny 1300 io Fanambarana io ary mbola mitombo izany. Eto ambany, hahita ilay lahatsoratra orijinalin'ilay Fanambarana ianao. Afaka manasonia an'io Fanambarana io ianao eto; afaka mirotsaka anatin'izany ihany koa ianao avy amin'ny alalan'ireo fikambanana maro tsy tambo isaina, isan'izany ny EFF, Access, eny fa na dia ny Cheezburger aza.
Tantaran'ny Mediam-bahoaka farany 2 ora izayAfrika Avaratra sy Afovoany AtsinananaMihetsika Ny Kroasiana Manoloana Ny Fanambaran'ny ISIS Ny Fanapahan-doha An'i Tomislav Salopek
2 ora izayAzia AtsinananaSiansa-Famisavisana Shinoa Nandrombaka ny Loka Hugo Tantara Foronona Tsara Indrindra
3 ora izayEoropa Afovoany & AtsinananaMpanakanto Okrainiana Manao Sariitatra Ny Fanagadrana Azy Tao Donetsk
Vakio amin'ny teny 日本語, Español, 한국어, Filipino, polski, Français, Deutsch, Italiano, فارسی, Português, македонски, عربي, Magyar, Türkçe, Nederlands, Català, Shqip, Български, বাংলা, Swahili, Ελληνικά, bahasa Indonesia, Aymara, 繁體中文, 简体中文, Svenska, srpski, اردو, Dansk, ျမန္မာ, русский, English